Tokio Blues: iyo "kuyedza" iyo yakaisa basa raHaruki Murakami | Zvazvino Zvinyorwa
Tokyo Blues (1987) ingano yechishanu nemunyori wechiJapan Haruki Murakami. Panguva yekuburitswa kwayo, munyori wechiJapan akange asiri muenzi munyika yekutsikisa uye akange aratidzira chimiro chakasiyana muzvinyorwa zvake zvekare. Uyezve, iye pachake akafunga nezvechinyorwa ichi senge rudzi rweyedzo yaive nechinangwa chekutsvaga nyaya dzakadzika nenzira yakapusa.
Mhedzisiro yacho yaive nyaya inokwanisa kubatana nevanhu veese mazera, kunyanya nevateereri vadiki. Muchokwadi, anopfuura mamirioni mana emakopi e Tokyo Blues. Nekudaro, rakave zita rekutsaurira remunyori wechiJapan, uyo akahwina mibairo yakawanda kubva ipapo. Uye zvakare, zita rake rinoenderera kuve mumiriri weNobel Prize muMabhuku.
1 Tokyo Blues pfupiso
1.1 Kutanga nzira
1.2 Hushamwari nenjodzi
2 Tokyo blues, mumashoko aMurakami
3 Gumi Tokyo Tokyo blues mitsara
4 Nezve munyori, Haruki Murakami
4.1 Nhanganyaya yemunyori wenguva yemberi
4.2 Kusimuka kwemunyori anotengesa zvakanyanya
5 Stylistic uye fungidziro maficha ezvinyorwa zvaHaruki Murakami
5.1 Surrealism, mashiripiti echokwadi, oneirism ... kana musanganiswa wevose?
5.2 Iyo Murakamian singularity
5.3 Nei rondedzero yaMurakamian ichiunza ruvengo rwakanyanya?
6 Mabhuku mashanu aMurakami anotengesa zvakanyanya
Pfupiso ye Tokyo Blues
Kutanga kwebhuku kunosuma Toru Watanabe, murume ane makore makumi matatu nemanomwe akabvutwa akakwira ndege (iri kumhara) riinhi teerera kune rwiyo rwakakosha. Chidimbu icho - "ChiNorway Wood", nebhendi rechirungu reThe Beatles— kunomumutsa vazhinji ndangariro dzehudiki hwake (kubva panguva yake semudzidzi wepayunivhesiti).
Nenzira iyoyo iyo nyaya inofamba ichienda kuguta reTokyo muma1960. Panguva iyoyo, zviitiko zvinokanganisa zvakaitika pasi rese nekuda kwehondo inotonhora uye dzakasiyana nzanga dzekurwa. Zvichakadaro, Watanabe anotaurira ruzivo rwekugara kwake muguta guru ChiJapane ine manzwiro anonzwisisika ekusagadzikana uye kusurukirwa.
Tokyo blues (ChiNorway ...
Sezvo nyaya ichienderera mberi, protagonist anoyeuka ruzivo nezve yavo zviitiko zveyunivhesiti, mimhanzi ipi yaakateerera uye hunhu husinganzwisisike hwevamwe vaaishanda navo. Saizvozvo, Watanabe inokurumidza kutaura kuvadikani vake uye kwavo kusangana pabonde. Tevere, anonongedzera kuda kwaaive nako Kizuki, shamwari yake yepamwoyo kubvira pakuyaruka, naNaoko, musikana wake.
Nenzira yakadaro, hupenyu hwakajeka hwezuva nezuva hunopfuura (kunzwa kunokonzerwa nemutauro wakapusa uye wepedyo wenyaya ...). kusvikira nhamo inotanga muhupenyu uye unoratidzira psyche yevatambi zvachose: Kizuki anozviuraya. Mukuedza kwako kukunda kurasikirwa kunotyisa, Toru anosarudza kutiza Naoko kwegore.
Naoko naToru vakasangana zvakare kuyunivhesiti mushure menguva yekuparadzaniswa. A) Ehe, hushamwari hwechokwadi hwakabuda hwakapa mukana wekukwezvana kusingadzivisike. Asi, achiri kuratidza zviratidzo zvekusasimba kwepfungwa, nekudaro, aifanira kusangana nematambudziko ekare. Nenzira iyi, mukadzi wechidiki akagamuchirwa kunzvimbo yekubatsirwa kwepfungwa uye zororo.
Kuvharirwa kwaNaoko kwakawedzera kunzwa kwaWatanabe kwekusurukirwa, nekuda kwechikonzero ichi, akatanga kuratidza zviratidzo zvekusavapo zvakanaka. Gare gare, akafunga kuti akadanana naMidori, mumwe musikana aishandira kurerutsa kusuwa kwake. Ipapo, Toru akaputirwa nechamupupuri chekuda, bonde, uye kusagadzikana kunzwa kwekunzwa kwakabatwa pakati pevakadzi vaviri.
Iko kuvandudzwa kwezviitiko zvinonzwisisika kunosundira protagonist kune imwe mhando yekuratidzira kwakadzika kuburikidza nematanho akarota. Muchiitiko ichi, hazvigoneke kusiyanisa zvakajeka izvo zvinhu kana zvinhu zviri zvechokwadi uye zvinofungidzirwa. Pakupedzisira, kudzikama kwaunoda kunogoneka chete kana protagonist ichikwanisa kukura kubva mukati.
Tokyo blues, mumashoko aMurakami
Muhurukuro ne Nyika (2007) kubva kuSpain, Murakami akatsanangura maringe ne "kuyedza" Tokyo Blues, inotevera: "Ini handina kana basa nekunyora ma novels akareba nemaitiro chaiwo, "asi ndakafunga kuti, kana kamwe chete, ndainyora bhuku rechokwadi." Iye munyori weJapan akawedzera kuti haawanzo kuverenga mabhuku ake mushure mekunge aburitswa, sezvo iye asina chinongedzo kuzvinhu zvekare.
Gare gare, mubvunzurudzo yakaitwa naXavier Ayén (2014), Murakami akarondedzera hukama hwake hwevatambi vane matambudziko epfungwa. Nezveizvi, akati: “Isu tese tine yedu yega mhando yematambudziko epfungwa, ayo atinogona dzimwe nguva kuramba tisingazive, pasina kuoneka pamusoro. Asi isu tese tiri vatorwa, isu tese tinopenga zvishoma ... ”
Mitsara gumi ye Tokyo blues
"Kana iwe wakakomberedzwa nerima, imwe chete nzira ndeyekugara wakamira kusvika maziso ako ajaira rima."
"Chinoita kuti tive vanhu vakajairika kuziva kuti isu hatisi vanhuwo."
"Usazvinzwire tsitsi. Vanhu vechidiki chete ndivo vanoita izvozvo ”.
"Kana ndikaverenga zvakafanana nevamwe, ndinopedzisira ndafunga saivo."
"Rufu harupikisane nehupenyu, rufu rwunowanikwa muhupenyu hwedu."
“Hapana munhu anofarira kusurukirwa. Asi ini handina basa nekuita shamwari chero zvodii ”.
"Hakuna here mhando yememory limbo mumuviri wangu umo ndangariro dzese dzakakosha dzinoungana dzosanduka kuita matope?"
"Izvi zvinoitika kwauri nekuti zvinopa pfungwa yekuti hauna hanya nekufarirwa nevamwe."
"Murume akaverenga katatu Mukuru Gatsby inogona kunge iri shamwari yangu ”.
"Ivo vakasiririsa vakawungudza kana kuzevezera, zvichienderana nekuti mhepo yairova nenzira ipi."
Nezve munyori, Haruki Murakami
Munyori wechiJapan anozivikanwa kwazvo pasi rino nhasi akaberekerwa muKyoto muna Ndira 12, 1949. Iye werudzi rwechiBhudha mumongi uye chete mwana. Vabereki vake, Miyuki naChiaki Murakami, vaive vadzidzisi veMabhuku. Nechikonzero ichi, Haruki mudiki akakurira akakomberedzwa netsika tsika, nemabhuku akawanda kubva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi (mukubatana neJapanese).
Saizvozvowo, mimhanzi yeAnglo-Saxon yaive nyaya yakajairika mumhuri yekwaMurakami. Kusvika padanho rekuti mimhanzi uye zvinyorwa simba renyika dzekuMadokero chiratidzo chekunyora kwaMurakamian. Gare gare, the young Haruki akasarudza kudzidza yemitambo uye chiGreek kuYunivhesiti yeWaseda, imwe yevakakurumbira muJapan. Ikoko akasangana uyo nhasi mudzimai wake, Yoko.
Nhanganyaya yemunyori wenguva yemberi
Munguva yake seyunivhesiti mudzidzi, Murakami aishanda muchitoro chemimhanzi (chevinyl zvinyorwa) uye aiwanzoitirwa jazz tavern "Genre yemumhanzi yaanoda." Kubva pakuravira ikoko kwakamuka kuti muna 1974 (kusvika 1981) akafunga kurenda nzvimbo kuti amise jazi bhawa pamwe chete nemukadzi wake; vakamubhabhatidza "Peter Cat." Vaviri vacho vakasarudza kusava nevana nekuda kwekusavimba kwavo chizvarwa chinotevera.
Kusimuka kwemunyori anotengesa zvakanyanya
Muna 1978, Haruki Murakami mimba pfungwa ye kuva munyori panguva yemutambo webaseball. Gore rakatevera yakakanda Inzwa rwiyo rwemhepo (1979), bhuku rake rekutanga. Kubva makore mashanu iwayo, munyori wechiJapan akaramba achigadzira nyaya dzine mavara anoshamisa mune mamwe mamiriro anovhiringidza.
Murakami aigara muUnited States pakati pa1986 na1995. Panguva iyi, kuvhurwa kwe ChiNorway Wood —Zita rekutsiva Tokyo Blues- akaratidzira kusimuka mune rake basa rekunyora. Kunyangwe nyaya dzake dzakarumbidzwa nemamiriyoni evateveri kumakondinendi mashanu, haana kuregererwa pakushoropodzwa.
Stylistic uye fungidziro maficha ezvinyorwa zvaHaruki Murakami
Surrealism, mashiripiti echokwadi, oneirism ... kana musanganiswa wevose?
Basa romunyori kubva kunyika yezuva rinobuda hapana anosiya asina hanya. Kunyangwe ivo vari vanyori vatsoropodzi, vaongorori vezvidzidzo kana vaverengi, iyo pfungwa yezvakasikwa zvemakamakamani inomutsa kuyemura kwakasimba kana ruvengo rusina kujairika. Ndokunge, hapana zvinoita kunge paine midpoints kana uchiongorora basa raMurakami. Ndeipi chikonzero chekuyedzwa kwakadaro (pre)?
Kune rimwe divi, Murakami inobata kunyora nechinangwa chekuti vanoshora pfungwa, nekuda kwekuzvipira kwake kusingarambiki kune kurota nyika. Nekudaro, iwo masisitimu asina kujairika akagadzirwa nemaJapan anouya padhuze nhaurwa yesurreal. Pamusoro pe, aesthetics, mamwe mavara uye zvinyorwa zvinyorwa chengetedza zvakawanda kufanana ine maumbirwo e mashiripiti echokwadi.
Iyo Murakamian singularity
Fungidziro, kurota semhepo yemuchadenga, uye zvakasarudzika zvakasikwa zvinhu zvakajairika mukati merungano rwaMurakami.. Nekudaro, hazvisi nyore kuzvitsanangura mukati meiyo chaiyo yazvino, nekuti mune yavo nyaya nharaunda uye nguva zvinowanzo tenderedzwa kana kumonyaniswa. Uku kushanduka kwechokwadi kunogona kuitika mumamiriro ekunyepedzera kana mukati mepfungwa dzevatambi.
Nei rondedzero yaMurakamian ichiunza ruvengo rwakanyanya?
Murakami, sevamwe vanhu vanotengesa zvakanyanya - Dan Brown kana Paul Coelho, semuenzaniso-, ave kupomerwa "kudzokorora nehunhu hwake uye zvinyorwa." Pamusoro pezvo, vanokanganisa mabhuku eAsia vanonongedza kuti kusavapo kwemiganhu pakati pekufungidzira neicho chaicho kunoguma kwavhiringidza (zvisina basa?) Muverengi.
Zvisinei, zvakawanda zvekukanganisa kwaMurakami kunoonekwa sehunhu hwakakura nemauto evateveri uye manzwi anofarira nzira yake yekutanga yekutaura nyaya. Hunhu hwese hwataurwa maererano nerondedzero yakatakurwa ne surreal, zviroto uye zvekufungidzira zvinhu zvinoonekwa mukati Tokyo Blues.
Mabhuku mashanu aMurakami anotengesa zvakanyanya
Nhoroondo yeshiri iyo inotenderera nyika (1997)
Sputnik, mudiwa wangu (1999)
Kafka pamhenderekedzo (2002)
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Novela » Tokyo Blues
Jane Austen: mabhuku
Juan Tranche. Kubvunzana nemunyori waSpiculus